काे हुन् सुपरस्टार मेस्सीलाई घर फर्काउने १९ वर्षीय अम्बापे ? - Everest Dainik - News from Nepal
काे हुन् सुपरस्टार मेस्सीलाई घर फर्काउने १९ वर्षीय अम्बापे ?
यस विश्वकपमा लियोनेल मेस्सी, क्रिस्चियानो रोनाल्डो र नेइमार सुरुदेखि नै चर्चामा थिए तर उनीहरूको दुर्भाग्य नै भन्नु पर्छ यी मध्ये दुई सुपर स्टार: मेस्सी र रोनाल्डो विश्वकपबाट बाहिरिई सकेका छन् ।
र नेइमारले विश्वकपका आउँदा म्याचहरूखेल्ने या नखेल्ने भन्ने कुराको टुंगो भोलि साँझ ८ बजेबाट ब्राजिलले मेक्सिकोसँगहुने खेलको नतिजाले निर्धारित गर्नेछ।
तर यस विश्वकपमा मेस्सीको टीम विरुद्ध ५ मिनेटकै अन्तरमा दुई गोलगरेरअचानक चर्चामा आएका छन् फ्रेन्च टीमका सदस्य किलियन अम्बापे।
अम्बापेकै यस प्रदर्शनका कारण फ्रान्स अर्जेन्टिनालाई ४-३ ले स्तब्ध पार्दै आठौँ चोटी विश्वकप फुटबलको क्वाटर फाइनलमा पुग्न सफल भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस २१औं विश्वकप फुटबलमा ‘फ्लप’ स्टार को-को ?
र उनी कम उमेरमा विश्वकपको नकआउट चरणमा दोहोरो गोल गर्ने दोस्रो २० वर्ष मुनिको खेलाडी भएका छन् ।पेलेले १९५८ मा दोहोरो गोल गर्दा उनी मात्र १७ वर्षका थिए ।
१९ वर्षीय युवा अम्बापेयो म्याच लियोनेल मेस्सीको टीम विरुद्ध खेलिराखेका थिए जससँग ४-४ वटा विश्वकप खेलेको अनुभव थियो । धेरैलाई यस खेलको नतिजाले अनुभवी मेस्सी र यस प्रकारको प्रतियोगितामा नयाँ अम्बापेबीच तुलना गर्ने अवसर प्रदान गरिदिएको छ ।
धेरैले भनेका छन् जे अनुभवी मेस्सीले एकपल्ट पनि गर्न सकेनन् यी युवाले दुई-दुई पल्ट गरेर देखाइदिए ।
सम्भवत: आफ्नो अन्तिम विश्वकप खेलिरहेका ३१ वर्षीय मेस्सी र पहिलो विश्वकपको अनुभव लिइरहेका अम्बापेकोप्रदर्शनहेरेर धेरैले मेस्सीकोउत्तराधिकारीको रूपमा हेर्न थालेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस विश्वकप फुटबलमा कुन टिमले कति पुरस्कार पाउँछन् ?
यस विश्वकपमा मेस्सीले लीग चरणमा नाइजेरिया विरुद्ध १ गोल मात्र गर्न भ्याए त्यहीं यी युवाले लीग चरणमा एक र नक-आउट चरणमा २ गरेर ३ गोल गरिसकेका छन्।
अम्बापेको विशेषता उनको गति र चपलता हो । उनको खेलमा टिप्पणी गर्ने क्रममा ‘द टेलिग्राफ’ लेख्छ,”उनको खुट्टामा बल आउनासाथ अर्जेन्टिनी रक्षा-पंक्तिका छरिता खेलाडी सुस्त र सुस्त खेलाडीहरू लोसे जस्तै देखिए ।”
फ्रान्सकैटोलीका अर्का सदस्य पाउल पोग्बालेडेलिमेलसँगको अन्तर्वार्तामा अम्बापे साह्रै गतिवान भएको र उनीसँग अरू कसैको तुलना हुन नसक्ने बताएका छन्।
याे पनि पढ्नुस विश्वकपमा सहभागी सर्वाधिक पाँच धनी खेलाडी, कसको कमाइ कति ? हेर्नुहोस्
यस विश्वकपमा अम्बापेको त्यति चर्चा भएन तर धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ उनी नेइमारसँगैएउटै टीमबाट लीग फुटबल खेल्ने गर्दछन् र उनी नेइमारपछिका सर्वाधिक महँगा खेलाडी पनि हुन् ।
उनलाई पेरिस सेन्ट-जर्माइन फुटबल क्लबले १२८ मिलियन पाउण्डमा खरिद गरेको थियो जुन रकम सर्वाधिक महँगा खेलाडी नेइमारको १९८ मिलियन पाउण्डपछि दोस्रो बढी हो । उनी सबैभन्दा महँगोमा अनुबन्धित भएका किशोर पनि हुन् ।
डिसेम्बर १९९८ मा जन्मिएका अम्बापेका पिता फुटबल प्रशिक्षक थिए भने उनकी आमा ह्यान्डबल खेलाडी थिइन् । सानैदेखि फुटबलमा रुचि राख्ने अम्बापे क्रिस्चियानो रोनाल्डोलाई आफ्नो आदर्श मान्ने गर्दछन् ।
ट्याग्स: Fifa world cup 2018, France vs Argentina, Mbappe